Shiinaha AYAA SOO SAARAY BULSHADA DALKA SOO SAARKA BADAN (Repalce AH) soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha bame damei kingmech
Awoodda: 3-5000m3 / h
Waxyaabaha: Cr27, Cr28, CD4MCu, qalabka liner liner
Khatimidii:xirmada xirmada, shaabad bixiyaha, shaabad mechnical.
Nooca 'HAD pump' waa mashiinno kala jaad ah, jiif ah, iskukhafaarayaal dhexdhexaad ah.Waxay ku habboon yihiin gudbinta qulqulka cufnaanta hoose ee waaxaha biraha, macdanta, dhuxusha iyo qalabka dhismaha.
Nooca HAD bambooyinku waxay ku shaqeeyaan si xawaare sare leh mugyo yar si ay u keydsadaan aagga sagxadaha. Taarikada jirku waxay leeyihiin beddello, safafka caagga ah ee birta u adkaysta xirmooyinka iyo mashiinka wax lagu shubay ayaa ka samaysan bir ama caag duug ah oo adkaysi u leh.
Gacanta usheeda dhexe
Tiro badan oo ka mid ah waajibaadka ayaa oggolaanaya isticmaalka shaabadda dhexe taas oo meesha ka saareysa baahida loo qabo in la daboolo biyaha.
Shandad shaambo nooca qanjidhka la buuxiyo ayaa sidoo kale la heli karaa waxaana lagu dhejin karaa qulqulka hoose ama qulqulka buuxa ee biyo-gelinta shaabadda.
Usheeda dhexe iyo golaha dhalista
Fiilo weyn oo dhexroor ah oo leh dib u habeyn gaaban ayaa yareyneysa leexashada iyo gariirka. Wareegyada gawaarida culus ee culus waxaa lagu hayaa kaydadka xamuulka qaada.
Tirada ugu yar haddii boolal lagu xiro mashiinka mashiinka mashiinka .Qabsiga hagaajinta qalabka wax lagu beddelayo ayaa lagu bixiyaa meel ku habboon guryaha ka hooseeya.
Kala-baxa qaybaha kala-baxa ee kabka ama birta ductile-ka ah waxay ka kooban yihiin khadadka xidhashada oo waxay siinayaan awood cadaadis hawlgal sare.
Qalabka wax lagu duubo wuxuu noqon karaa mid elastomer ah ama bir adag. Qaybaha qufulka dhinaca qubeyska ayaa hoos u dhigaya cadaadiska shaabadda waxayna yareeyaan dib u soo celinta.
Mawduucyada tuurista-tuurista ayaa ku habboon jilicsanaanta.
Bir adag oo la is-weydaarsan karo iyo xargaha elastomer-sameysan.
Wajiyada isweydaarsiga ee safafka biraha adag ayaa la duubay si loo oggolaado isku dheelitirnaan wanaagsan inta lagu jiro isku-darka waxayna u oggolaaneysaa in qaybaha si fudud looga saaro beddelkooda.
Giraanta shaabadda Haydarooliga waxay siinayaan daboolid wanaagsan inta udhaxeysa wejiyada isqaba
Alumina, Macdanta Macdanta, Macdanta Birta, Saliida Gaaska, Dhuxusha, warshadaha korontada, fosfate, Bauxite, Dahab, Potash, Wolfram, Adeegyada bulaacada biyaha, Sonkorta, Tubaakada, Bacriminta kiimikada.
Hore: GPD Guud Ujeeddo Gawaarida Gawaarida (Repalce GPS)
Xiga: HADPP Shaqo Culus oo Xakamaynta Mashiinka Xaraashka ah ee Taxanaha ah (Dib u celi AHPP)
API610 OH5 (CCD) Bamka
HADPP Duty culus culus xoqid slurry Taxanaha ...
VFD Vertical Froth saar (Repalce AF)